Nongedzo yekumisikidza Gnome-Kudonha seGnome 2 muUbuntu 11.10 | Kubva kuLinux
Nongedzo yekumisikidza Gnome-Kudonha seGnome 2 muUbuntu 11.10
Dmitry Shachnev yakanyora inonakidza diki dhaidhi kune avo vashandisi ve Ubuntu chii chaunoda kupfuura kubva kubatana uye vanoda kuva nechimwe chinhu chakafanana nechavaive navo Ubuntu 10.10 (ine Gnome2) somuenzaniso.
Izvo zvakakodzera kuti utarise sezvo mhedzisiro yacho ichave chinhu chakadai.
Kubva pane zvandaiona, zvinoitwa nemunyori kuwedzera zvimwe zvinhu ku Gnome-Kudonha uye mhedzisiro kubva mumaonero angu inoshamisa: Iyo Ubuntu logo mune menyu, iyo kumashure kwepaneru ine dingindira re Ambiance, Compiz inomhanya uye mireza yeUbuntu sekunge yaive gnome 2.
Unofungei? Unogona kuona gwara mukati Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Nongedzo yekumisikidza Gnome-Kudonha seGnome 2 muUbuntu 11.10
asi iwe haugone kuwedzera maapplet pane iro jira (unogona here?)
Hongu, hongu unogona: alt + kurudyi mbeva bhatani pane jira. Izvo zvinoita kuti mamiriro ezviratidziro e «wedzera kune mapaneru, fambisa, bvisa kubva panhare ...».
Izvo zvakare zvinoshanda kuendesa wachi kurudyi: alt + kurudyi mbeva bhatani pane wachi uye isu tichazoratidzwa sarudzo yekufambisa iyo applet.
Mhoro, taura kuti gnome-fallback inokwana 3.2 inogona kuiswa yakafanana nehunhu. Neapplet nezvose. Kwayedzwa mu debian, iyo nzira ndeinotevera yekudzvanya alt kiyi uyezve nekomboni yekurudyi yegonzo pabhawa. Sapakutanga, iwe chete unofanirwa kudzvanya iyo alt kiyi, ivo vanga vatozviona zvasara sepakutanga pasina iyo alt kiyi kana yeiyi kana kudzima. Kana iwe uchida skrini, ini ndinoitumira asi handizive kuti sei.
hongu, asi zvishoma zvakashata, mamwe acho handina kuyedza, asi maapuro eema sensors, grey color nechitema kumashure, hazviite zvine musoro, ndinofungidzira kuti inogona kumisikidzwa kumwe kunhu, mune zvido zve sensor haina
zvakadaro, iyo desktop haigone kuzadza chero chinhu
gnome yakarasikirwa nekushandiswa kwese kwayanga iine, zvese zvinowedzera kuomarara, hapana munhu anogona kuzviramba
ndinogara ne xfce
Izvo zvagara zvichishanda kubvira Gnome yabuda, zvinoitika ndezvekuti vashoma vaiziva 😀
Mhoroi, gadzira madingindira uye isa mifananidzo pa desktop ini handisati ndaziva maitiro ekuzviita mune gnome kudonha nenzira yakapusa. Unyengeri hwandinoshandisa ndehwe gnome tweak chishandiso negnome shell, ini ndinoshandura dingindira nezvose zvimwe ndokudzokera kune gnome kudonha. Musoro wakanaka unotsigira gtk2 / gtk3 ndeye Evolve.
Ini ndatopa nzira yekushandura zviri nyore theme uye ma icon mune gnome kudonha. Isa dconf-mupepeti, wozoenda kunotanga / system chishandiso / dconf mupepeti, org / gnome / desktop / interface, uye chinja ma icon uye madingindira.
Ndine urombo, pasuru yekuisa ndeye dconf-zvishandiso
Goverana yako Conky kumisikidzwa